पेसा | Kavyakunja
आजको समाजमा बैवाहिक संस्थाको आवश्यकता लेखिएको ठूलो तुल सभाकक्षको भित्तामा टाँगिएको थियो । तुल टाँगिएकै भित्ता मुन्तिर पन्ध्रजना मानिसहरुका लागि कुर्सी राखिएको मञ्चको व्यवस्था थियो । तुलमा लेखिएको विषयमा उपत्यकाका क्याम्पसस्तरका विद्यार्थीहरुका वीच प्रतियोगितात्मक वादविवाद कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । नेपालको मुलुकी ऐनमा भरखरै मात्र पुरुषहरुले पनि पारपाचुकेका लागि अदालतसमक्ष पहिलो उजुरी गर्न पाउने नयाँ कानुन पारित भएको सन्दर्भ पनि यसबेला मननयोग्य चर्चाको विषय थियो ।
स्नातकोत्तर प्रथम वर्षका विद्यार्थीहरुको समूह र स्नातक अन्तिम वर्षका विद्यार्थीहरुको समूहको वादविवादमा सहभागिता थियो । विश्वविद्यालयका समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी, मानव अधिकारवादी, स्थानीय राजनीतिक वृत्तका शिर्षस्थ प्रौढ व्यक्ति, नारीवादी साहित्यकार, साहित्यकार र अनुभवी प्राध्यापक समेत सम्मिलित दस जनाको निर्णायक टोलीको मञ्चमा सजग उपस्थिति थियो ।
प्रतियोगितात्मक वादविवादको विषयको पक्षमा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरुको समूहले भाग लिएको थियो भने विपक्षमा स्नातक तहका विद्यार्थीहरुको समूहले भाग लिएको थियो ।
”समाजलाई मर्यादित राख्न, परिवारलाई बचाउन, मानवीय वंश परंपरा चलाउन, स्त्रीजातिलाई प्रतिष्ठित गर्न बैवाहिक संस्थाको आवश्यकता छ” भन्ने बुँदाहरुमा विषयका पक्षका विद्यार्थीहरुले बोलेका थिए । अर्कातिर ”स्त्रीजातिलाई दासी बनाउने, मानवीय स्वतन्त्रताको हनन् गर्ने, थोत्रो र आडम्बर पूर्णको सामाजिक मान्यतालाई शिरमा बोकाउने बैवाहिक संस्था खारेज हुनु पर्छ” भन्ने बुँदाहरुमा विषयका विपक्षका विद्यार्थीहरु कुर्लेका थिए । यी उल्लेखित दुवै पक्षका विचारहरु विद्यार्थीहरुले निकै जोडतोडले प्रस्तुत गरे । दुवैथरिका विचारहरु अत्यन्त उर्जाशील थिए । निर्णायक मण्डलले निर्णय दिइहाल्न पनि सजिलो काम थिएन ।
निर्णायकहरु माझ विषयको गम्भीरताबारे निकै विमर्श भयो । कुन पक्षलाई विजयी घोषित गर्ने भन्ने छलफलले एकअर्का वीच अनुहारै रातो पार्ने गरी चर्को बहस पनि भयो । चर्काचर्कीमा नारीवादी साहित्यकारहरु निकै उत्साही देखिन्थे भने साहित्यकारको अनुहारमा कुनै रङ थिएन । मानवअधिकारवादी र समाजशास्त्रीहरु निकै गम्भीर देखिन्थे । स्थानीय एक राजनैतिक वृत्तका प्रौढ व्यक्तित्वको अनुहार प्रतिक्रिया विहीन देखिन्थ्यो । उनी कतै जाने हतारमा बारंवार आफ्नै नारीमा बाँधिएको घडी हेर्दै थिए । प्राध्यापकका अनुहारमा पनि कुनै जिज्ञाशा भए झैं देखिंदैन थियो । उनमा पनि सुस्तता देखिंदो थियो ।
”यो विषय तुरुन्त निर्णयदिने किसिमको होइन । मेरो विचारमा यी विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको भनाई पुष्टि गर्ने प्रकारका मौलिक उदाहरण पेश गर्ने जिम्माका साथ आजको कार्यक्रमको बीट मारौं ।” अन्त्यमा समाजशास्त्रीद्वारा राखिएको यो प्रस्ताव सबै निर्णायकलाई मान्य भयो ।
प्रौढ प्राध्यापकलाई निर्णायक मण्डलको नेतृत्वको अभिभारा दिइएकाले उनैले यो निर्णयविद्यार्थीहरु माझ उद्घोष गरे । जसअनुरुप सहभागी विद्यार्थीहरुलाई आजका दसौंदिनमा आआफ्ना पक्षले प्रस्तुत गरेका तर्क पुष्टि हुनेखालका मौलिक उदाहरणका साथमा उपस्थित हुने सूचना जारी गरिएको थियो ।
त्यसैवीच निर्णायकमध्येका समाजशास्त्री माइक सामु पुगे र बोल्न थाले, ‘प्यारा विद्यार्थीवर्ग तथा आदरणीय प्राध्यापकवर्ग ! हेर्नु होस् आजको विषय तुरुन्त निर्णयदिन सकिने किसिमको होइन । आजको हाम्रो यस निर्णयले समाजलाई मार्ग निर्देशन गर्छ । त्यसैले हचुवा पारामा निर्णयगर्नु उपयुक्त छैन । तपाईं प्रतिस्पर्धीहरुले मौलिक एवम् व्यवहारिक प्रमाण पेश गर्नु नै यस विषयको माग हो । अनि त्यसपछि मात्र हामी यस बारे निर्णय गर्ने छौं ।’
दस दिनपछि :
सोही स्थान र सोही समयमा अघिल्ला कार्यक्रमका सहभागी र स्रोता तथा नौ जना निर्णायकहरु भेला भएका थिए । दसौं निर्णायक अर्थात् राजनैतिक व्यक्तित्वको कार्यक्रममा अनुपस्थिति रहृयो । अहिलेको नेपालमा राजनीति धेरै दुषित भइसकेकाले राजनीतिज्ञप्रति जनमानसमा वितृष्णा नै जागिसकेको छ । त्यसैले राजनैतिक व्यक्तिको अनुपस्थितिलाई कसैले वास्ता पनि गरेनन् । भागवण्डाका लागि प्रतिनिधित्व गराइएका उनको अनुपस्थिति सबैका लागि प्रिय नै थियो ।
”त्यस कार्यक्रममा प्रस्तुत अधिकांश उदाहरणहरु हाम्रै आँखा ओरिपरि छ्याप्छ्याप्ती भएका कारण म ती सबै उदाहरणहरु यहाँ प्रस्तुत गरेर तपाईंहरुको समय खेर फल्न चाहन्न । तर मलाई पनि घत लागेको स्नातक तहका विद्यार्थीहरुद्वारा विषयको विपक्षमा प्रस्तुत गरिएको एउटा उदाहरण तपाईहरुलाई पनि पढाउन मन लागेकाले सो उदाहरण म यहाँ उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु । अनि यो सबैभन्दा अन्तिम उदाहरणका रुपमा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको कुरा पनि यहाँहरुलाई जानकारी गराउँछु ।
१. धुमधाम प्रेम गरेपछि उमेश र उन्नतीले विहे गरे । केही वर्षसाथै विताएका उनीहरुले एउटा सन्तान पनि जन्माए । तर क्रमशः आर्थिक हाहाकारको चपेटाले उनीहरुको प्रेम नै धरासयी हुन लाग्यो । ‘ल अब अरु जस्तै म पनि विदेश गएर पैसा कमाउँछु,’ उमेशले उन्नतीसँग भन्यो र दिनरात विदेश जाने चक्करमा लाग्यो । तर उसले मौका पटक्कै पाएन । दलालहरुसँगको निरन्तरको उठबसले स्वास्नीलाई पठाउने हो भने सकिन्छ भन्ने कुरा उमेशले नै पत्ता लगायो । ‘दिनरात घर झगडा गरेर बस्नुभन्दा बरु आफुले बच्ची हेरिदिएर उन्नतीलाई नै विदेश पठाउन सके पैसाको त दुक्ख हुने छैन ।’ उमेश र उन्नतीवीच कुरा मिल्यो र नै उन्नती पैसा कमाउन इजरायल जाने भई ।
३. इजरायलमा उन्नती पुगेपछि उसलाई घरको र छोरीको सम्झनाले आक्रान्त पार्‍यो । ‘पैसै सबैथोक होइन, काखकी छोरी र त्यस्तो माया गर्ने लोग्ने छोडेर यहाँ आएर मैले यो के गरें’ भन्ने पछुतो पनि भयो उसलाई । एक मन ‘फर्क्यौ कि’ जस्तो पनि लाग्यो उसलाई । तर पैसैका लागि लोग्ने स्वास्नीका वीचमा हुने गरेका झै झगडा पनि तत्काल उसले सम्झी । पैसा नभए छोरीको भविष्य अन्धकार हुने पनि उसले सम्झी । अनि त्यसैत्यसै नेपाल फर्किने मन मरेर आयो उसको । ‘होस् .. अब जे होला ! आएको खर्च उठाउँछु । अलिअलि खर्चपानी पनि जम्मा गर्छु अनि मात्रै फिर्छु भन्ने दह्रो निर्णय गरेर उसले मन बाँधी ।
४. सन्तबहादुर र उन्नती सल्लाह गरेर एकहप्ताको फरकमा घर फर्के । त्यसक्रममा पहिले सन्तबहादुर घर फर्केको थियो ।
अँगालो भरिकी स्वास्नी छोडेर परचक्रि दुनियाँमा पैसाका लागि हराउनु परेको दुखेसो सन्तबहादुरले आफ्नी स्वास्नीसँग पोख्यो । सन्तबहादुरले दुई वर्षको हुँदा छोडेर गएको जेठो छोरो सात वर्षको भइसकेछ । कान्छाको न्वारन गरेर ऊ विदेश गएको थियो, त्यो पनि अब हुर्किसकेछ । आफ्ना कल्कलाउँदा दुई भाइ छोरा देखेर सन्तेको मन खुशीले उम्लिरहृयो । सन्तबहादुरका लोग्नेस्वास्नीले एकअर्काको अभावमा विताएका अनिंदा रातहरुको बखानमा रुँदैहाँस्दै पहिलो रात विताए । एकअर्कालाई आआफ्ना पत्नीव्रता र पतिव्रताको प्रमाण पनि पेश गरिरहे । दुवैले एकअर्कालाई कहिल्यै धोका दिन नसक्ने विचारहरु पनि आपसमा साटिरहे । साथै एकअर्काका कामकुराले दुवै जना सन्तुष्ट भए ।
६. उमेशले सिनेमाको टिकट काट्यो । उन्नतीले छोरी डोर्‍याई । उनीहरु सिनेमा हेर्न गए । सन्ते स्वास्नी र दुईभाइ छोरा चेपेर मेला घुम्न गयो । उमेशले सन्तु भाउजु तिर फर्केर पनि हेरेको थिएन । सन्तु भाउजुले पनि उमेशलाई पसलमा आउनेजाने अन्य ग्राहकजस्तै सामान्य चिनेकोजस्तो मात्र गरेकी थिई । अनि सन्ते र उन्नतीले पनि एकअर्कालाई सामान्य चिनेजानेको मानिसको जस्तो मात्र भाव व्यक्त गरेका थिए । मानौं हिजो दुवैको सम्बन्ध एकअर्कासँग घनिष्ठ थियो भन्ने कुराको दुवैलाई हेक्कै थिएन । त्यस बेला दुइटै जोडी आफ्नो पेशाप्रतिको गर्वमा समाहित थियो । सत्यवान र सावित्रीको पर्याय जस्ता भएर त्यस घडी दुवै जोडी हाँसिरहेका थिए ।
‘अहिले प्रत्यक्ष जे देखिंदै छ यही नै मात्र सत्य हो । बाँकी सबै झुठो हो, मात्र झुठो !’ वातावरण गुञ्जायमान थियो ।
यो कस्तो बैवाहिक संस्था हो – यस्तो झुठो र आडम्बरी संस्थाको औचित्य के हो – किन चाहियो यस्तो नाटकीय संस्था – अबको समाजमा यस्तो संस्थाको अस्तित्व नै समाप्त पार्नु पर्छ । बैवाहिक दुईदुई जोडीको एकैठाँउ खामिएको उदाहरण यसरी देखापरेपछि यस्तै थुप्रै आक्रोशित प्रश्नहरु प्रतिध्वनित हुने नै भए । हो ! त्यसैले यस्तो बैवाहिक संस्थाको औचित्य छँदैछैन । बैवाहिक संस्था यथाशिघ्र खारेज गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।”
काठमाडौंको पुसको जाडो याममा पनि यो उदाहरण पढिसकेको विद्यार्थीले उसको अनुहारबाट बगेको खल्खली पसिना गोजिबाट रुमाल झिकेर पुछेको थियो ।
अब विद्यार्थीहरुबाट उदाहरण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम सकिएको थियो ।
निर्णायक मण्डलको नेतृत्व गरिरहेका प्राध्यापक निर्णयबोकेर स्रोता सामु माइकमा उभिए । सँधै गम्भीर देखिने प्रौढ प्राध्यापक त्यसबेला थप प्रौढ देखिएका थिए । उनको गम्भीर अनुहारको तल्लो किनारातिर रहेको मुख विस्तारै खुलेको थियो र त्यसबाट गह्रौं आवाज निस्केको थियो । ‘तपाईं विद्यार्थीहरुले लिनुभएको पक्ष र विपक्षका उदाहरणहरु सुनेर हामी निर्णायकहरुले कसैलाई पनि विजयी घोषित गर्न उपयुक्त ठहर गरेनौं । तर तपाईंहरुले नै प्रस्तुत गर्नु भएका उदाहरणकै आधारमा हामीले वैवाहिक संस्थाका बारेमा यस्तो ठहर गरेका छौं :
“हाम्रो विचारमा बैवाहिक संस्थाको आवश्यकता आज पनि हिजो जत्तिकै छ । तर कुनै पनि सन्दर्भलाई समय सापेक्ष बनाउँदै लैजानु समयको माग हो । हाम्रो समाजमा जुन बेला जुन किसिमले वैवाहिक संस्थाको स्थापना भयो त्यस बेलाको सांसारिक र सामाजिक स्वरुपमा आज अकल्पनीय परिवर्तन आइसकेको छ । त्यसैले उतिबेला स्थापित वैवाहिक संस्थासम्बन्धी मान्यताहरु अहिलेको परिवर्तित र दु्रतत्तर परिवर्तनशील समाजका लागि अनुपयुक्त हुनु अनौठो कुरा पनि होइन । पारम्परिक वैवाहिक संस्थाका मुल्य र मान्यता अब धरासयी भइसकेका छन् । तिनै मूल्य र मान्यतालाई नै अङ्गीकार गर्न नछोड्ने हो भने वैवाहिक संस्थाले किमार्थ निरन्तरता पाउन पनि सक्तैन । पारपाचुकेको भयदायक संख्यात्मक वृद्धि त्यसैको परिणति हो ।’
प्राध्यापकको आवाज शुष्क भएपनि उनको प्रस्तुतिकरण ओजस्वी थियो । आफुले प्रक्षेपण गरिरहेको विचारको प्रतिक्रिया हेर्न उनले एकै क्षण वाचन रोकेर स्रोता दीर्घातिर आँखा दौडाए । स्रोता दीर्घा अकल्पनीय रुपमा उनको विचारप्रति आकषिर्त थियो । सचेत जनसमूहको आफु केन्द्रित ध्यानले प्राध्यापकलाई थप विचार प्रस्तुतिका लागि प्रेरित गर्‍यो । उनी पुनः लिखित विचार प्रक्षेपणमा लागे ।
‘मानिस परिवारमा रमाउने जीव हो, परिवार उसको आवश्यकता हो । पारपाचुकेले परिवार भत्काउने काम गर्छ । जसको असर सम्पूर्ण समाजलाई पनि पर्छ । त्यसैले वैवाहिक संस्थालाई जोगाउनु भनेको परिवारलाई जोगाउनु हो । परिवार जोगाउँदा क्रमशः समाज, राष्ट्र र विश्व जोगाउने उपक्रम वैवाहिक संस्थासँगै गाँसिएका छन् । त्यसैले अबका दिनमा बैवाहिक संस्थालाई जोगाउन जत्ति आवश्यक छ त्यसभन्दा बढी यस संस्थालाई परिमार्जन गर्न पनि आवश्यक छ ।
जैविक, भौतिक तथा मानसिक आवश्यकताका लागि प्राणीले अनिवार्य रुपमा साथ पनि खोज्छ । आफैद्वारा आफूलाई सर्वोच्च प्राणीमा दरिने मानवमात्रले यस्तो संगती कहाँ, कतिखेर र कोसँग गर्छ भन्ने कुरा समय र परिस्थितिले नै निर्धारण गर्छ । पुरुषले युगौंदेखि गर्दै आएको नारीमाथिको एकाधिकारपूर्णको शासनको पनि अब अन्त्य भइसकेको छ । अहिले नारीले पनि आफ्नो अधिकारको झण्डा फहराइसकेको युग हो । त्यसैले पनि पितृसत्तात्मकताको उपज प्रचलित बैवाहिक संस्थाको स्वरुपको औचित्य भने अब समाप्त प्रायः छ ।
अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीमा मानवजीवनका अथाह विश्रृङ्खलताहरुले थिचिएर संवेदनाको मृत्यु भइसकेको छ । यर्सथ पनि यस युगमा पतिपत्नीको सम्बन्धलाई मायाप्रेममा मात्रै बाँध्नुभन्दा यस सम्बन्धलाई एउटा पेसाका रुपमा नै रुपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । अबका दिनमा बैवाहिक संस्थाभित्र प्रवेश गर्ने लोग्ने मानिसले आफुलाई ‘लोग्न’ पेसामा र स्वास्नी मानिसले आफुलाई ‘स्वास्नी’ पेसामा संलग्न भएको स्वीकार्नु पर्छ । बैवाहिक संस्थामा संलग्न भएका दुवै पेसाधारीले आय आर्जनका लागि बाहिरी दुनियाँमा संलग्न हुनुपर्ने संभावना अत्याधिक छ । लोग्नेस्वास्नी पेसाधारीले आफ्नो लोग्नेस्वास्नी पेसाप्रति चाहिं इमान्दार भएर आय आर्जनमा पनि लाग्नु पर्छ । जुन पेसाको प्रमुख दायित्वका स्वरुप उनीहरुकै सन्तान हुने छन् । त्यसैगरी यस पेसाको क्षेत्रफल उनीहरुद्वारा नै निर्धारित वंशपरम्परा हुने छ । यस पेसाले परिवारको सीमारेखा भित्र कर्त्तव्यपरायणताको आचारसंहितालाई पालन गर्नु पर्ने छ ।
स्नातक तहका विद्यार्थीहरुद्वारा विषयको विपक्षमा प्रस्तुत गरिएको अन्तिम उदाहरण नै आजको वैवाहिक संस्थाले माग गरेको स्वरुप हो । तर यस उदाहरणको प्रस्तुतिपछि वैवाहिक संस्थाको खारेजीको माग गरिएकाले यस समूहलाई पनि हामीले विजयी घोषित गर्न सकेनौं ।’
आदरणीय महानुभावहरु ! प्रतियोगितात्मक यस वादविवादमा सहभागी सबैको जीत र सबैको हार भएको छ भन्ने हाम्रो निर्णयछ ।
प्रौढ प्राध्यापकले निर्णयसुनाइसकेपछि स्रोता दीर्घातिर प्रतिक्रियाका लागि पुनः आँखा घुमाए ।
तर स्रोता संसार चाहिं मौन थियो ।